1,961 total views, 15 views today
वर्तमान प्रतिकुल समय कोभिड– १९ (कोरोना)महामारीलाई मध्यनजर गर्दे जो जहाँ छौ आ–आफ्नो स्थानमा बसेर नयाँ बिधिले दशै मनाउनु पर्ने बाध्यतालाई अवश्य स्वीकार गरौं ।यसपालीको दशै सुरक्षित तरीकाले मनाऔं । संयमीत भई टीका ग्रहण गरौ, आर्शिबाद प्राप्त गरौ, सबै प्राणिमा दया भाव राख्न सकौं, एक अर्का प्रति सहयोगी बनौ , सर्बश्रेष्ठ सामाजिक प्राणिको नाताले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरौ ।
ब्रह्माकुमारी शान्ति, भैरहवा
जस्तो सुकै समय र परिस्थितीले पनि पर्वहरु आउँने क्रमलाई छेक्न सक्दैन । असहज वातावरणका विच यतिबेला हामी सामु आईपुगेको छ बडा दशै । बडा दशै नजिकिदै गर्दावच्चादेखि वृद्धसम्म सबैमा एक प्रकारको उंमग उत्साह र खुशी झल्किदै जान्छ । नेपालको सेरोफेरोमा भन्नुपर्दा दशैंएउटा यस्तो महत्वपुर्ण र महान पर्व हो जसकोमाध्यमले परिवारजन, इष्टमित्र, नाता गोता, छर छिमेक सबैसँग मंगल मिलन गर्ने सुअवसर प्राप्त हुन्छ ।विदेशमा गएको छोरो ……यतिवर्ष भै सक्यो भेट भाछैन अब दशैमा आउछं,होला भेट हुन्छ ।
स–साना बच्चाहरुका लागि अव दशैमा वावा आउनुहुन्छ, राम्रो नाना ल्याउनुहुन्छ,आमाले मीठो मीठो पकाउनुहुन्छखाने, राम्रो लगाउने, टीका, जमराले सजिने…आदि । दशै टाढा हुदै, अब दशै आउन यति बाकी छ ….टीका लगाउने, पीङ्ग खेल्ने,दशैमा मामा घर जाने या यसपाली दशैमा फलानो ठाउँ घुम्न जाने हो आदि इत्यादिविचार,योजना र उल्लास भरी कल्पना हरुले सबैलाई खुशी बनाईरहेको हुन्छ ।साथै जव आश्विन महिनाको शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शुरु हुन्छ अनि दशैको हर्षेाउल्लासमय वातावरणमा अझै वृद्धि भएको हामी पाउँछौं । घटस्थापनाको दिनबाट दियो कलश र गणेशको स्थापना गरी प्रतिपदा देखि नवमी सम्म नौ दिन खास गरी देवीहरुको स्मृति पुजा पाठ आराधाना गरी विशेष रुपमा नवरात्री मनाइन्छ । अनि दशमीको दिनलाई विशेष विजयादशमी (दशै) विजय उत्सवको रुपमा मनाइन्छ ।
खुशी खुशी टीका जमरा र प्रसाद स्वीकार गरेर यसरी दशै पर्वलाई हामीले खास गरी आफूबाट ठुला (मान्यजन) हरुको हातबाट टीका लगाएर आर्शिवाद लिई आफ्नो जीवनमा उन्नति प्रगतीको अपेक्षा गर्दे अघि बढ्ने पर्वको रुपमा मानिरहेका छौ । दशैले वर्षभरिका दुखदर्दलाई विर्साइदिन्छ । अनि जीवनमा पुन नयाँ सोच,नयाँ दिशा र नयाँ जाँगर प्राप्तीको अनुभुति हुन्छ । जीवनका विभिन्न लक्ष्य योजनाका कारण तथा वाध्यतावश पनि टाढिन, अलग अलग छरीन पुगेका परीवारका सदस्यहरु का वीच पुन मिलन दशैले गराइदिन्छ । चाहे भौतिक रुपमा, स्थानमा टाढा हुन पुगेका हुन चाहे विभिन्न कारणवश सम्बन्धमा दरार आएर टाढिएका हुन, एक्लै एक्लै निराश भै जीवन व्यतीत गरीरहेका वृद्ध, युवा र वालक, पति पत्नी परीवारका सदस्यहरुमा संगठनात्मक सुमुधुर एकता र सद्भाव कायम गरी दिन्छ दशैंले ।
दशै शब्द सुन्दासाथ दशैको सम्मुखमा पुग्ना साथ हामीमा एक प्रकारको शुभभाव उत्पन्न हुन्छ । अतःहामी एक आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्न आतुर हुन्छौ । कुनै समय यस्तो थियो शुभकामना पोस्ट कार्ड र चिठी पत्रको माध्यमबाट लेनदेनगरिन्थ्यो । आज हामी सुचना प्रविधिको अत्यन्त विकसित र वैज्ञानिक युगमा छौ । हाम्रा मोवाइल तथा फेसबुक एकाउण्ट भरिएका छन् शुभकामनाका शब्द गुच्छाले । गीत, कविता, गजल साथै भिडियो, नाटकआदि विभिन्न विधिबाट भेट हुनुपर्दैन नेटको माध्यमबाट नै शुभकामना आदानप्रदान गर्न पाइरहेका छौ । दशै होस या तिहार, नयाँवर्ष होस् या अन्य कुनै पर्वमा यसरी शुभभावना आदानप्रदान गर्न व्यस्त हुन्छौ, मस्त हुन्छौ र खुशिपनि हुन्छौ । आज करौडौ रुपैया खर्चपनि भइरहेको छशुभकामना आदानप्रदान मा । यो सम्पुर्ण क्रियाकलाप बाट यही स्पष्ट हुन्छ कि कुनैपनि पर्वलाई हामीले यसरी धुमधाम उत्साह पूर्वक मनाइरहेका छौ यो एक सकारात्मक पाटोपनि हो ।
तर अर्कातिर हामीले देखिनै रहेका छौ दशैको साथ साथै दशा पनि भित्री रहेको छ । मार्मिक लाग्छ मलाई केटाकेटि अवस्थामा सुन्ने गरेको यो पङ्गती“दशै आयो दशै आयो खाउँला पिउँला कहाँबाट ल्याउला चोरी ल्याउँला…।” भनिन्छ हुनेहरुका .लागि दशै, नहुनेहरुका लागि दशा । कोई दशैका नाममा देवी दर्शन को आडम्बर बोकेर पशुवली दिन आतुरछन् । भने कोई जुवातासको थुप्रोमा हराईरहेका छन । कसैलाई दशैको सपिङ्ग गर्ने रन्को छ भने कसैलाई गरगहना र महंगाा कपडाले आफूलाई ढपक्क ढाकेर हिड्नमा गर्व छ । तर कसैलाई दशैको एक दिन हातमुख जोर्ने जोहो गर्न पनि मुश्किल भईरहेको दुखद अवस्था पनि हामी सामु छ ।
दशै आयो अव सानो सानो छोरा छोरी लाई राम्रा नाना र मीठो खानाकता बाट पु¥याउने भन्ने चिन्ताले सताई रहेको छ ।दशै मनाउनका निम्ती न्यूनतम आवश्यकतासम्म पनि पुरा गर्न नसक्ने हरुका लागि त घुम्ने फिरने नयाँ योजना का त कुनै कुरै भएन । यसपालिको दशै त झनै यस्तो विषम परिस्थितीका बीच आईपुगेको छ ।कोभिड– १९ को कारण विगतमा जस्तो खुलेर दशै मनाउने अवस्थापनि छैन ।
दशै र दशाको सन्दर्भमा अर्काेसोचनिय कुरा–निरिह प्राणीको दशा लाग्नुनै पर्ने हो त दशैंमा ?के पशुवली दिनु पर्ने नै होत दशैमा ? मादक पदार्थ, जुवातासमा रमाउनै पर्ने हो त दशैंमा ? दशैले हामीलाई के सन्देश दिन खोजेको होला ? वास्तविक दशैको अर्थ के हो त? आज यसरी हामीले सँस्कृति र परम्परा को नाममा गर्दे आएका धार्मिक क्रियाकलापहरु ले के परिवर्तन ल्याए हामीमा ? विचार गरौं दशै मात्र नभैसबै चाडपर्वहरुमा हामीले गर्ने गरेका क्रृयाकलापहरुबाट ?विशेष गरी देवी दानवको युद्ध अनि दानवहरु माथि देवीको विजय अनि राम र रावणको युद्धमा रामको विजय आदि प्रसंगहरु सगं दशैपर्व जोडिएको छ ।यी प्रसंग किवंदन्तीहरु बाट हामीले आज हाम्रो जीवनमा के कस्ता सोच जागृति गर्नु पर्ला, के शिक्षा लिनु पर्ला ? यस तर्फ सोच्न आवश्यक छ ।
वास्तवमा आज हामीले न केवल दशैको सम्मुखमा न केवल कुनै दिवस तथा उत्सवका दिनमा सधै आफुभित्रका असत्यता, दानवी वृतिहरुलाई,नकारात्मक विचारहरुलाई विशेष रुपमा ध्यान दिएर हटाउदै जानु र आध्यात्मिक शक्तिलाई जगाउनु पर्ने आवश्यकता छ । हामी भित्र जकडीएर बसेको रावणपना काम क्रोध लोभ,मोह, अहंकार, छलकपट, इष्र्या, बद्लाको भावना इत्यादि दुर्गुणलाई मारेर प्रेम, एकता र सद्भावलाई जगाउनु आवश्यक छ । मनमा आध्यात्मिक ज्ञानको ज्योति बालेर आत्मारुपी कलशमा पवित्र भावना रुपी अमृत राखेर जीवनमा आउन सक्ने (संभावित) प्रतिकुल परिस्थितिमा सामना गर्ने शक्ति (मनोबल) मा वृद्धि गर्नु को जरुरत छ । हाम्रा मनभित्रका असत्यता र अज्ञानता रुपी अधंकार लाई मेटाएर आफ्नो दृष्टि र वृतिलाई पवित्र उच्च र स्वस्थ बनाउनको आवश्यकता छ । दशैको सेरोफेरोमा आज सबै भन्दा बढि चर्चाको विषय बनेको छ पशुवली । के देवी माताले आफ्नै सन्तती निरिह प्राणीलाई (पशुवली) स्विकार गर्छीन होला त ? अहिंसा परमो धर्मको संदेश दिने धर्मका अनुयायीहरु ले पशुवली …लाई स्थान दिनु उचित हुन सक्ला?हामी भित्र भएको पशुत्वको वली दिनु जसबाट देवी माता खुशी हुन्छिन । निर्दाेष प्राणिको वलि होइन नकारात्मक प्रवृतिलाई देवी माताको नाममा छोडीदिउ । यसैमा हाम्रो सबैको कल्याण हुनेछ ।
आज हामीजस्तो सुखद परिवार समाज देश अनि विश्वको चाहना गछौं त्यसको स्थापनाको लागि दुर्गुणलाई नाश गरौ । एक अर्काको निन्दा गर्ने, बदला लिने,इष्र्या गर्ने, अशुभ सोच्ने, बोल्ने र गर्ने जस्ता नराम्रा खराव आदतहरु लाई एक एक गरी काट्दै जाऔं,ं वलि दिदै जाऔं । सधै सधै सुखद र शुद्ध विचारमा आफुलाई अभ्यस्त बनाऔ । सबैको भलो गरौ, वास्तविक रुपमा मनमा सकारात्मक विचार उत्पन्न गरी त्यसलाई फलीभुत बनाउदै जाऔंं अनि दशैमाझै सधै सधै हामी रमाउन सक्नेछौ ।जस्तो हामी कर्मरुपी वीउ रोप्दछौ उस्तै फल हात लाग्दछ । त्यसैले सधै खुशी, प्रेम, एकता,सुख शान्ति, आनन्द चाहन्छौ भने सधै श्रेष्ठ र शुद्ध विचारलाई मनमा उचित स्थान दिऔं ।वर्तमान समय जहां एकातिर भौतिक विकास तिव्ररुपमा आफ्नो बाटोमा अगाडि छ । त्यहां आध्यात्मिकता उपेक्षित छ । फलस्वरुप हामी दुखी छौ । त्यसैले कहिले काही पर्वको वहानामा हामी विभिन्न विधि र क्रियाकलापको माध्यमले खुशी हुने प्रयास गछौ । तर यदि हामी आध्यात्मिक शक्ति र दैवि शक्तीलाई सधै सधै सम्मान गदछौ, उजागर गर्दछौ भने सधै सधै खुशि, शान्त, आनन्दित हुनसक्छौ ।
यहां म यो महत्वपुर्ण सदेंशलाई जोड्न चाहन्छु कि वर्तमान समय सर्वमान्य ज्योतिविन्दु स्वरुप परमात्माले कलियुगी दुनिया जहाँ आसुरीयता र भष्टा«चारको बोलवाला छ यसलाई अन्त्य गर्नका लागि नारी शक्तिको माध्यमले आफ्नो महान दिव्य कर्तब्यको शुरुवात गरी सक्नु भएको छ । जन जन मा आध्यात्मिक (आत्मिक) ज्योति जगाई आसुरी वृत्तिलाई नाश गरी सत्य युग (रामराज्य) को पुनस्थापनाको कार्य शुभारम्भ गरी सक्नु भएको छ । जहां एकता र सद्भाव हुन्छ । जसको गायन पनि छ गाई र बाघले पनि एउटै कुवामा पानी पिउथे भन्ने । नारी शक्ति अर्थात शिव शक्ति। शिव परमात्माले नारी शक्तिको माध्यमले मानव मनमा विद्यमान असुरको संहार गर्दे हुनुहुन्छ । अब हामी यसै अभिमान मा जुटौ ।स्व परीवर्तनबाट नै विश्व परीवर्तन हुन्छ । परीवर्तनका लागि अरुलाई नहेरौ आफैबाट शुरु गरौ ।
देवीको महिमा गर्नुको साथै दैवी शक्तिलाई आफू भित्र जगाउने कर्मपनि गरौ । आफ्नो मनमा बसीरहेको महिसासुर, मधुकैटभ, रक्त विन्दु तथा धर्मलोचनलाई नाश गरौ । आत्मा ज्योति जगाएर आसुरीयताको अन्त्य गर्न तिर आफ्नो कदम लाई अगाडि बढाऔ । आफै भीत्रको दैत्य र रावणलाई मार्न सकौं ।निर्दोष प्राणिको जीवन लीला समाप्त पारेर दशै नमनाऔ । जुवातासमा रमाएर धन नाश गरी दशै नमनाऔं ।भइनभई ऋण लिएर मिठो खानु पर्ने राम्रो लाउनु नै पर्ने वाध्यतामा दशै नमनाऔ ।
वर्तमान प्रतिकुल समय कोभिड– १९ (कोरोना)महामारीलाई मध्यनजर गर्दे जो जहाँ छौ आ–आफ्नो स्थानमा बसेर नयाँ बिधिले दशै मनाउनु पर्ने बाध्यतालाई अवश्य स्वीकार गरौं ।यसपालीको दशै सुरक्षित तरीकाले मनाऔं । संयमीत भई टीका ग्रहण गरौ, आर्शिबाद प्राप्त गरौ, सबै प्राणिमा दया भाव राख्न सकौं, एक अर्का प्रति सहयोगी बनौ , सर्बश्रेष्ठ सामाजिक प्राणिको नाताले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरौ । अत : सबै परिस्थितीमा रम्न सक्ने, उचित तरिकाले सामना गर्न सक्ने , आन्तरिक आत्मिक शक्ति जगाउन तर्फ यहाँहरुका पाइला अगाडि बढुन,उच्च मनोबलका साथ विषम परिस्थिती माथि विजय प्राप्त गर्ने शक्ति आओस् यसपाली बडा दशैको यही शुभकामना ।ॐ शान्ति
(लेखक ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय एवम राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र नेपालको क्षेत्रीय प्रमुखको रुपमा भैरहवामा सेवारत हुनुहुन्छ ।)
Posted in लेख/अन्तरवार्ता
Previous Post: भैरहवामै पिसिआर परिक्षण सुरु
Next Post: रौनक हराएको दशैं
LeaveaReply to Ok News Cancel reply